Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: oadray ireto vola mikararàna | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: oadray ireto vola mikararàna
Par Les Nouvelles sur 11/10/2018
Tsy mahataitra ny olona intsony ny fahitana ny setrasetran’ny vola ampiasain’ny mpifaninana eo amin’ny fifidianana izay ho filohan’ny Repoblika. Na izany aza, manitikitika ny saina ihany ny fitobaky ny haren’izy ireo. Anisan’izany ny fanakaramana ireo mpikambana sy mpitady vola manolo-tena samy manao irakiraka, ny vola ho an’ny fampiasana fitaovana lafo vidy na fiara mandeha amin’ny tany na fiara manidintsidina an’abakabaka, ireo fitaovana fanamafisam-peo izay efa mankarenin-tsofina indraindray…
Mibaribary avy hatrany fa tsy mifandanja ny herin’ny mpifaninana raha dinihina amin’ny lafiny fandanim-bola. Eo ireo afaka mirobaroba, eo kosa ny sasany izay voatery hifarirotra satria mangirifiry aminy avokoa rehefa fandaniana noho ny hanifin’ny tahiry ao an-tsopitra.
Na izany aza, tsy azo alaina an-tendrony fotsiny ny fitsarana ny fahadiovan’ireo mpilatsaka. Mety ho diso mantsy, ary hanao fanendrikendrehana tsy rariny raha avy amin’ny fahitana ny fandanian’ny tsirairay vola aman-karena entina hiatrehana ny fampielezan-kevitra sy fandresen-dahatra no itsarana azy ireo ka hoboriboriana amin’ny fiheverana fa ny mpanana dia mety ho maramara saina, ary ny sahirankirana dia olo-marina. Amin’ireo mpifaninana voatery hihafihafy dia tsy ilaozan’ny manana toe-tsaina malotoloto, ary toy izany koa, ny mpanana dia tsy ho voatery ho olona tsy manam-panahy. Noho izany, sady tsy rariny no mety handiso hevitra ny fanaovana safobe mantsina ambony ihany.
Ny mahatonga fitsaratsarana fahatany toy izany dia ny fiheverana fa misy mpamatsy vola ao ambadik’ireo mpilatsaka be vola. Mety ho diso koa anefa izany. Amin’ireo tsy mitsitsy ny fandanina, misy izay tsy nila fanampina noho ny tenany satria sady mpanefoefo no maro namana izay mpanana toa azy, ary anivon’ireo kely fofon’aina kosa dia misy izay azo heverina fa nahazo fanohanana avy amina mpamatsy. Ny manahirana anefa dia ahiana fa ireny mpamatsy ireny dia mitaky sandan’ny vola apetrany. Tsy hita holazaina avy hatrany ho karazana fivarotana tanindrazana izany, nefa kosa mety hisy fahamatorana ihany ka lasa misarisary kolikoly ihany izany fanao izany.
Ao, hono, misy mpanara-maso izay mandanjalanja ny fahadiovan’ny vola enti-miady. Mbola tsy àry fitaovana tsara, sady angamba tsy tsara omana ny sampana anankinana izany, hany ka atahorana ny fitongilanana eo amin’ny fanatanterahan’izy ireo izany andraikitra saro-pady izany.